wamafutha tetracycline kuyinto izidakamizwa elwa namagciwane esetshenziswa ihlelwe ngokulandelana kwezihloko. Made ku amafutha emulsifier ekhethekile. Omunye igremu amayunithi ayizinkulungwane 3 equkethwe hydrochloride tetracycline. izidakamizwa Itholakala amaphakethe of 30 no-50 g Sisindvo Color - yellow.
Kukhona amehlo tetracycline wamafutha equkethe 0.1 g 1 g tetracycline Lusebenza iziguli trachoma (wezifo ezithelelanayo iso), conjunctivitis (ocular ukuvuvukala udonga lwangaphandle), blepharitis (ukuvuvukala imiphetho Isivalo) kanye nezinye izifo iso ezithathelwanayo. Tetracycline iso wamafutha selibekiwe ephansi ijwabu leso izikhathi ezintathu kuya kwezinhlanu isikhathi esingaphezu kosuku.
Ikakhulu esetshenziswa tetracycline wamafutha for induna, kodwa kunezinkomba zokuthi phakathi kwezinye lubucayi kakhudlwana izifo zesikhumba. Phakathi kwabo - induna, streptostafilodermii (pustular esehlaselwa isifo sesikhumba esenyanyekayo, okuyinto kubangelwa kokubili staphylococci futhi streptococci), furunculosis (multiple ubovu isikhumba ukuvuvukala), folliculitis (ukuvuvukala izinwele follicle), eczema itheleleke (neyroallergicheskoe isikhumba ukuvuvukala ne ukungcoliswa microbial), izilonda trophic kanye nezinye .
Tetracycline wamafutha isetshenziswa isikhumba ethintekile kanye noma kabili ngelanga, noma isicelo ngesimo ngebhandeshi. Lesi sakamuva kumele esikhundleni njalo ngemva kwamahora angu-12 noma angu-24. Ukwelashwa futhi ubude bayo incike esimweni ngabanye futhi kungenzeka ukuthi izinsuku ezimbalwa noma amasonto.
Kepha-side effects, kufanele kuphawulwe ukuthi nesenzakalo njalo ngemva kokufaka okugcoba kuyinto ukulunywa, ububomvu noma zivutha. Ezimweni ezinjalo, ukwelashwa nge izidakamizwa kufanele ayisekho. Ngaphansi ngokuvamile kukhona ukuhlanza, isicanucanu, imnyama, ubuhlungu besisu, ukuqunjelwa, uhudo, dysphagia, ulimi ukuvuvukala noma emphinjeni. Ngisho ngaphezulu ezingavamile side effects emva isicelo wamafutha kubhekwe ezihlukahlukene komzimba nezinto, iguliswa edema, kukhuphuke isikhumba nokuzwela UV ukukhanya. ukusetshenziswa eside wamafutha tetracycline kungabangela candidiasis, dysbiosis emathunjini, nokuntuleka B amavithamini emzimbeni, neutropenia, thrombocytopenia kanye nezinye izifo. Ukuze ugweme ukuxakeka kungenzeka futhi side effects ngaphambi kokusebenzisa umkhiqizo wakho, kubalulekile ukuba bonana nodokotela wakho kuqala.
Tetracycline wamafutha contraindicated kubantu nge ukungakhuli ezinzima hepatic, leukopenia, izifo fungal (izifo fungal), abesifazane abakhulelwe kanye nabantu abanombono sensitivity high emuthini kanye nezakhi zalo. Njengomthetho, namafutha is hhayi zaphathwa izingane ezingaphansi kweminyaka engu-iminyaka eyisishiyagalombili. Tetracycline wamafutha akufanele isetshenziswe ngesikhathi sokukhulelwa (ngenxa yokuthi tetracycline kunemiphumela teratogenic embungwini). Phakathi lactation, namafutha futhi kungcono hhayi ukuyisebenzisa.
Ukwakheka - aluminium amashubhu for 5, 10 noma 50 amagremu. Umuthi kumele agcinwe endaweni epholile futhi sifinyelele izingane.
wamafutha tetracycline: Izibuyekezo
Ochwepheshe uqaphele ukuthi inzuzo eyinhloko umuthi wentengo okungabizi. Phakathi amaphutha - ezihlukahlukene enqabayo komzimba. Lokhu okugcoba isetshenziswa isikhathi eside futhi adume phakathi kubantu abaphethwe nezinduna. Into esemqoka - kudokotela ngaphambi kokuba uyisebenzise uma ukugwema izinkinga eziningi esikhathini esizayo. Abantu okwadingeka asebenzelane nemithi nale izidakamizwa, ngokuvumelana okungcono ukuba nontanga yakhe, ngenxa yezindleko ongaphakeme kanye kalula yokusetshenziswa.
Isexwayiso! Lesi sihloko ihloselwe kuphela ulwazi kanye imithi. Ukuze uthole olunye izincomo enemininingwane uzokunika kuphela onguchwepheshe.
"Aksamon" Tablets: yokusetshenziswa, intengo, analogs kanye nokubuyekeza
Imiphumela utshwala emzimbeni womuntu
Zilwane ezinhle, efana izingelosi noma izingelosi zibe
Isipho ngoba usana ehlobo: kuzothatha ezinyangeni ezimbalwa zokuqala?